Sida ugu dhaqsaha badan loogu sawiro Sawir gacmeedka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sidee ku sawir midab leh Photoshop si dhakhso leh oo fududna lagu gaadho natiijada ugu nadiifsan qaabka ilmaha iyada oo aan loo baahnayn in la aado dhinacyo farsamo oo aad u badan Photoshop laakiin si fudud u keenaya sawiradeena hab aad u fudud.
Baro fikradaha aasaasiga ah ee lagu muujiyo Photoshop si dhakhso leh u gaadh natiijooyin aad u cajaa'ib badan oo iftiimin doona dhammaan sawiradaas aad gacanta ku sawirtay oo aad rabto inaad midab ku siiso Photoshop.
Arrintan post waan baran doonaa u fududee sawiradayada oo fudud, ku dayashada ilmo yar sawirkiisa fudeydkiisa iyo maqnaanshaha faahfaahin farsamo oo heer sare ah.
Waxaan u soconaa midabka ku jira Photoshop sawiradayada laba siyaabood:
Bixinta midab aan tirtirin asalka rinji gacmeed
Midab siinta adigoo tirtiraya asalka iyo xulashada qaybaha ee sawirka
Waxaan ku baran doonaa laba dariiqo oo loo midabeeyo sawirkeenna sawir gacmeedka ah 'Photoshop', kuwan laba nooc faa iido badan ayey yeelan kartaa markaan la shaqeyneyno sawirro ka sii horumarsan Photoshop.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah sameyso lakab cusub en Photoshop iyo beddelo ah qaabka lakabka ee caadiga ah si loogu dhufto. Lakabka midabka ayaan korka saareynaa oo waxaan bilaabeynaa inaan ku rinjiyeeyno, waan arki doonaa sida inkasta oo sawirkeenu leeyahay khad madow midabku wuxuu joogaa khadka hoostiisa.
Waxaan sii wadeynaa midabaynta sawirka oo dhan adoo abuuraya lakabyo kala duwan oo loogu talagalay dabeecad kasta (haddii aan haysanno wax kabadan) tsidaasna ugu shaqee si ka raaxo badan oo nidaam leh.
Waan awoodnaa hadh iyo nal sii sawirkayaga haddii aan abuurno lakabyo cusub oo xulno midabbo fudud oo madow. Si tan loo sameeyo waa inaan kaliya qaado muunad midabkeena ah salka adigoo riixaya furaha alt oo leh qalabka burushka la xushay.
Sida xigta ee loo midabeeyo sawir waa masax asalka cad in hadhow la xusho qaybo ka mid ah sawirka si gooni gooni ah.
Waxa ugu horreeya ee aan sameyno waa xulashada qalab sixir oo bilaw Abuur xulashooyinka sawirka, waa inaan dooranay lakabka asalka ah ee sawirka.
waxaan dooranaa asalka cad leh aaladda sixirka
Waan masaxeynaa asalka poco a poco
Waxaan doorannaa qaybo ka mid ah sawirka waxaana bilawnay inaan midabeyno
Si aan u midabeyno sawirka waa inaan qaybaha kala dooro ka dibna qalabka burushka ayaan ku siin doonaa midabka gacanta sawirkayaga
Si tartiib ah waxaan dooraneynaa mid kasta oo ka mid ah qaybaha sawirkeena, waxaan u abuuri karnaa lakab cusub oo loogu talagalay gooni u shaqee dhammaan qaybaha sawirka. Haddii sawirkeennu leeyahay waxyaabo badan waxaa habboon in si gooni ah loogu shaqeeyo lakabyo nadiif ah iyo magacyo inaga caawin kara inaan isku taagno.
Tani waxay ku egtahay halkan post aasaasi ah ku saabsan sida loo sawiro sawiradayada Photoshop. Yar yar waan arki doonaa farsamooyin horumarsan si loo bilaabo barashada iyo hagaajinta sawiradeena dhijitaalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sidee Loogu Midabeeyaa Sawir gacmeedka Photoshop Deg Deg